​छोरा रोज्ने कि सौता ? « Jana Aastha News Online
प्रकाशित मिति : २६ माघ २०७४, शुक्रबार १४:०४
दुई वर्ष बच्चा नजन्माउने सोच थियो तर श्रीमान्ले बिहेको दुई÷चार महिनापछि बच्चा जन्माउन दबाब दिन थाले । ‘तिमीले किन जागिर खानुप¥यो ? आफ्नै घर छ काठमाडौंमा, दाजुभाइ छैनन्, अंश लगाउँदा पछि के होला भन्नु पर्दैन, दिदीको बिहे भइसक्यो, बुबाआमा र हामी दुई जना त हौँ नि † मेरो जागिर सोखका लागि भन्दा पनि हुन्छ, महिनामा ४० हजार घरभाडा आउँछ तिमीले मरिमरी पढेर नाम निकाली अधिकृत नै भयौ भने पनि कति नै कमाउँछ्यौ ? त्यो पैसाले के गर्ने ? कसका लागि कमाउने ? अभाव भयो भने दुःख गर्ने हो, तिमीलाई यही घर स्वर्ग छ भने किन दुःख गर्न मरिमेट्छौ ? बेलैमा सन्तान जन्माउने, हुर्काउने त्यतातिर पो सोच्नुपर्छ’…. यस्ता अनगिन्ती कुराको चाङ श्रीमान्ले धाराप्रवाह सुनाउँदा पवित्रा अवाक भइन्, रच्छ्यानमा मिल्काएको फोहोरसँग आफ्नो तुलना गरिन् । ‘भात पकाउनकै लागि, जुठा भाँडा माझ्नकै लागि त मेरी आमा पनि छिन् नि केही गरौँला भनेर यत्रो पढेकी हुँ । क नपढेकी मेरी आमा र म मा के फरक भयो त ? भात पकाउनकै लागि स्नातक पढेकी हुँ मैले ?’ धिक्कार जिन्दगी….. निरास बन्न थालिन् ।
के सोच्थँे मैले…के भयो अहिले भनेजस्तै भयो । पवित्राको इच्छामाथि सीधै बज्रपात बर्सियो, ‘श्रीमान्सामु न आँशु झरे न त दिल खुशी भयो । एक किसिमले मरेकै जुनी भयो भन्दा पनि हुन्छ’ पवित्राले गला अवरुद्ध पार्दै भनिन् । सरकारी अधिकृत हुने त सपना मात्रै भयो स्नातकसम्म पनि पूरा गर्न पाइनन् श्रीमान्का कारण ।
एक दिन पवित्राले बाध्य भएर मुख खोलिन्, ‘तपाईं किन यस्तो व्यवहार देखाउनुहुन्छ ? बूढा भएका बाआमाले के भन्लान् ? छिमेकी–आफन्तले के भन्लान् ? भर्खर सात वर्षमा पाइला टेकेकी यो अवोध छोरीले तपाईंबाट कस्तो पाठ सिक्ली ? छोरीको राम्रो शिक्षा र संस्कार सिकाउनुपर्छ भन्ने हिजोको तपाईं र आजको तपाईंमा किन यस्तो फरक ?’ पवित्राको कुरा एक टकले सुनेका श्रीमान् राता आँखा फर्काएर जवाफ दिन थाले । ‘केका लागि सम्पत्ति जोगाउने ? कसका लागि जोगाउने ? भोलि यत्रो दुःख गरेर कमाएको सम्पत्ति खाने को छ ? अहिले यो छोरी सात वर्षमा लागि, अलि ठूली हुन्छे, यसको बैंस आउँछ, बैंसको उन्मादमा यो पोइल जान्छे अनि यो सम्पत्ति कसले खान्छ र कसका लागि जोगाउने’……
पवित्राले फेरि सोधिन्, ‘तपाईंलाई छोरा नै चाहिने हो ? मैले पहिले नै त्यत्रो बिन्ती गर्दा किन जबर्जस्ती परिवार नियोजन गर्न बाध्य पार्नुभयो ? लोग्ने मान्छेको द्वैध चरित्रबारे सुने÷देखेको भएरै पटक–पटक के गरौँ भनेर सोधेकै हो, अब यो बेलामा आएर छोरा पाइदिनुपर्ने ? हिजो बोलेका कुरामा अलिकति प्रायःश्चित लाग्दैन ? पदको इज्जत लाग्दैन ? भोलि समाजले के भन्ला भन्ने लाग्दैन ? राजधानीमा बसेको, सरकारी जागिर खाएको शिक्षित मान्छेको थुइक्क बुद्धि ? तपाईं आफू छोरा भएर बाबुआमाको सम्पत्तिमा दाइँ गर्नुबाहेक के गर्नुभयो खै ? परिवार नियोजन गर्न लगाउने तपाईं, अहिले आएर छोरा चाहिन्छ भन्दै मनलाग्दी बोल्दै हिँड्ने पनि तपाईं ? कहाँका डाक्टरले सिकाए तपाईंलाई एकपटक परिवारनियोजन गरिसकेपछि फेरि बच्चा जन्माउन सकिन्छ भनेर ? कि आफंै डाक्टर बनेर यी कुरा बोल्दै हुनुहुन्छ ?’ श्रीमान् केही बोलेनन् ‘मलाई छोरा चाहिन्छ अर्को बिहे गरूँ कि अप्रेसन गरेको उल्टाउन मिल्छ रे उल्टाउने ? जे गरेर हुन्छ छोरा चाहिन्छ …..।’
अन्ततः ०७४ सालको कात्तिक दोस्रो साता बानेश्वरको सिभिल अस्पतालमा उनै पवित्राले दोस्रो सन्तानको रूपमा छोरा जन्माइन् । उनको स्याहारसुसार छोरीले गर्दै थिइन्, श्रीमान् देखिएका थिएनन् । बूढीआमा र छोरीले पवित्रा र बच्चाको हेरचाह गरेका थिए । श्रीमान् खै त ? पवित्राले रुञ्चे अनुहारमा भन्थिन्, ‘विदेशको तालिममा गएका छन् ।’ वरपरका सबै बिरामी कुरुवा पवित्रालाई नै हेर्थे, बूढी आमैहरू सोध्थे ‘नानी, तपाईंलाई हेरचाह गर्ने यी फुच्ची बहिनी हुन् ?’ पवित्रा लाजले भुतुक्क हुन्थिन्, र विस्तारै जवाफमा ‘बहिनी होइन छोरी हो’ भन्थिन् । छोरी यति ठूली भइसकेपछि किन बच्चा जन्माको त ? जन्माउने नै भएपछि ५÷६ वर्षको अन्तरमा जन्माको भए हुन्थ्यो, सँगसँगै हुर्कन्थे, अब त बहिनी तपाईंका छोरा र छोरीको त पुस्तान्तरण नै हुन्छ । पवित्रासँग जवाफ थिएन, भित्रभित्रै धिक्कार्थिन् श्रीमान्लाई पापी, अधर्मी यो बेलामा मलाई यस्तो भोग्नुपर्ने ? जन्माउनु नै पर्ने भएपछि बेलैमा जन्माएर उम्किसक्थँे ….. पवित्रालाई भित्रभित्रै ऐठन हुन्थ्यो । अप्रेसन गरेर बच्चा जन्माएका कारण ४ दिनको उनको अस्पताल बसाइ साँच्चिकै पीडादायी भयो अरू कारणले भन्दा पनि प्रश्न सोध्नेलाई दिएका जवाफका कारण ।